Ama egwuregwu ime ụlọ maka ọrịre, akụrụngwa egwuregwu - Funlandia
Ụmụaka na -egwu egwu
Funlandia Play Systems Inc. bụ onye nrụpụta ama ama ama ama ama nke na -eme egwuregwu egwuregwu ime ụlọ, ma n'ime ụlọ ma na mba ụwa. Anyị na -enye ndị ahịa anyị ihe ngwọta zuru oke maka ụlọ ọrụ egwuregwu ime ụlọ site na nhazi, imewe, nyocha na mmepe, mmepụta, iwu, ime ihe ruo mgbe ọrụ ahịa gachara.
Funlandia na -ewu ebe egwuregwu ime ụlọ dịka ụkpụrụ nchekwa na ịdị mma nke North America na Europe si dị. Site na akụrụngwa ruo ebe egwuregwu niile, Funlandia agabigala ule asambodo nchekwa siri ike n'ụwa, dịka ASTM, EN na CSA, ma tinye ụkpụrụ ndị a na nkọwa niile site na nyocha na mmepe ruo imepụta, mmepụta na nrụnye.
Atụmatụ & Kere
Anyị bụ ndị otu na-ahụ maka ime egwuregwu 'fusion' nke ụlọ ọrụ mba ofesi.
Anyị na -anya isi ụmụaka Play & Adventure, 300+ akụrụngwa egwuregwu ọhụrụ.
Ụkpụrụ dị mma
Anyị na -ezute nchekwa na ụkpụrụ ịdị mma nke North America na Europe.
Anyị agabigala ule asambodo nchekwa siri ike dịka ASTM na EN.
Ọrụ & Ndị Mmekọ
Anyị nwere ndị ọrụ 200+ ndị mmadụ na ndị mmekọ na kọntinent 6.
Mgbidi na -arịgo
Ụlọ akwụkwọ Ninja Junior
Ụlọ nkwari akụ & Inn
Ngwọta Play-Key Play
Mepụta & Wụnye
Mmemme ụwa anyị
Na China Na Global
Project ： BEIYOU International
Project ： BEIYOU International Ọnọdụ: China
Ụlọ ọrụ ： L SPORTS PARK
Ụlọ ọrụ ： L SPORTS PARK Ọnọdụ: China
Ihe oru ngo a ： 798 FLY SPORT
Ihe oru ngo a ： 798 FLY SPORT Ọnọdụ: China
Project PL AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Project PL AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ Ọnọdụ: China
Ihe oru ngo: Ime anwansi
Ihe oru ngo: Ime anwansi Ọnọdụ: New Zealand
Project: Supaworld Ọnọdụ: Australia
Ihe oru ngo: Cosmic Kid
Ihe oru ngo: Cosmic Kid Ọnọdụ: France
Project: Nnukwu ogige
Project: Nnukwu ogige Ọnọdụ: France
Mgbe ị na -eche maka imepe ebe egwuregwu, nye anyị ohere!
Sonyere Obodo Anyị
Copyright 2010-2021 funlandia.com Ikike Niile Echekwabara. Ngwaahịa na -ekpo ọkụMap saịtịEgwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ime ụlọ, Nnukwu Trampoline Park Franchise, Ndị na -emepụta ebe egwuregwu ụmụaka, Nrụpụta ogige Trampoline, Ọnụ ego egwuregwu franchise dị n'ime ụlọ, Kpọọ akụrụngwa maka ụmụaka,